SALAK (MIRO MASAL): SIDA LOO CUNO, SIFOOYINKA FAA'IIDO LEH IYO WAXYEELO - MIRAHA
Kuwa nasiib u leh inay booqdaan Thailand ugu yaraan hal mar waxay ogtahay sida xulashada kala duwan ee miraha ugu quruxda badan dalkan uu u soo bandhigo dadka deggan. Maxay yihiin noocyada caanka ah ee loo yaqaan 'durian, jackfruit, miro masduulay, maprao, shompu, guava, lychee, longan, mangosteen, noi-na, rambutan, santol, sapodilla ama tamarind! Liistada sidoo kale waxaa ku jira miro aan caadi ahayn, oo la yiraahdo salak, ama salacca (oo ah Laatiinka - Salacca zalacca), oo loo yaqaan 'miro yara' (qaybta Ingiriisiga - "miro masab"). Dhawaan, mucjisadan dibedda ah ayaa dhif ah laga heli karaa dukaamada.
Waa maxay salak
Magaca "miro yar" wuxuu keeni karaa ururo kala duwan, laakiin xaqiiqda ah, miraha midkoodna waxba kuma laha xamaaradda: abeesada ha cunin oo xitaa ha ku noolaan meel u dhow. Dhirta Baltiga oo kaliya ayaa leh qaab qurux badan oo muuqaal ah, muuqaalka muuqaalka ah ee maqaarka harayga.
Salacca zalacca waa mid yar, qiyaas ahaan laba mitir (noocyada qaarkood waxay koraan ilaa 6 mitir), geed aad u kulul oo qulqulaya oo leh dhar farabadan oo tufaax ah iyo taajajir ballaadhan oo ka kooban jajab, caleemo cagaaran, cagaar dhalaalaya oo dibedda ah, caleemahaasi waxay noqon karaan hal iyo badh, ama xitaa saddex jeer dhererka geedka laftiisa. Labada jir iyo miraha caleemaha Baltiga ayaa lagu daboolay qodaxyo mugdi ah iyo miisaanno isku mid ah oo daboolaya dusha miro. Dhirta ragga iyo dumarka waxaa lagu kala saari karaa qaabka iyo cabbirka fooriyooyinka: "wiilasha" waxay gaari karaan mitir dheer waxayna u egyihiin xeelad, "gabdhaha" waa ugu yaraan saddex jeer gaaban.
Qaybaha miraha waxaa si toos ah uga koreeya dhulka, saldhigga garbaha. Waxay yaryihiin, xajmiga miraha kiwi, miro guduud ah, oo u eg sida pear ama dhibic biyo ah, oo ku xiran saldhigga dabka. Miisaanka midab kasta oo noocaan ah wuxuu u dhexeeyaa 50 illaa 100 garaam, dherer ilaa 8 cm, qiyaastii 3-4 cm dhexdhexaad ah Maqaarka maqaarka waxaa ku jira maqaarkiisa casriga ah ee cad ama midab kareem ah, badanaaba u kala qaybsan saddex qaybood, iyo hal illaa saddex abuur waa madow. - bunni (waxaa loo arkaa mid aan la dabooli karin, inkastoo dalalka qaarkood la kariyay, la nadiifiyey oo la cunay).
Waa muhiim! Kansarka, oo aan laga aqoonin dadka yurubiyanku waxay inta badan ku wareeraan xayawaanka Baltic, iyaga oo rumaysan in tani ay tahay magaca magaca Thai, oo ah mid mid la mid ah, waa xaqiiqda miro geedka kale, inkastoo ay tahay qaraabo dhow Salacca zalacca. Si ka duwan sida miro masaas ah, dhoobada ayaa leh casaan halkii uu ka maqan yahay maqaarka caleenta iyo waxoogaa dhadheer.
Meelaha loo qaybiyo sprat waa ficil ahaanba guud ahaan cimilada kulaylaha iyo cimilada, laakiin badanaa weli waa Southeast Asia. Marka laga reebo Tayland, geedkan calaacalkiisu wuxuu ku koraa Malaysia, Indonesia, iyo Hindiya, halkaasoo midhahaas aan loo isticmaalin kaliya in lagu diyaariyo noocyo kala duwan iyo cabitaan, laakiin sidoo kale si guul leh ayaa loo dhoofiyaa. In Indonesia, si kastaba ha ahaatee, miraha miraha ah ee sanadka oo dhan, iyo Malaysia iyo Thailand - kaliya bilaha xagaaga.
Dhadhanka "miro yar"
Qeexidda dhadhanka midhaha khafiifka ah ee qof aan waligiis isku dayin waa isku mid sida sharaxaadda qofka ku noolaa kaynta ku nool noloshiisa oo dhan baddiisa. Qoraal kasta wuxuu maskaxda ku hayaa ururadooda. Ka sokow Salak wuxuu si weyn u kala duwanaan karaa dhadhankiisa taasoo ku xiran meesha uu ku koray.
Qaar waxay sheeganayaan in midhaha masaska ay ugu badan tahay sida isku dar ah muuska iyo cananaaska, urta sida nuts; Qaar kale waxay yiraahdaan waa iskutallaab ku dhex jira kiwi iyo strawberry, qaar ayaa weli xasuustaa mooska, afaraad oo ku saabsan cherry, iyo shanaad oo ku saabsan fangaska cirrid. Isla mar ahaantaana, qof kastaa wuxuu dhajiyaa ari aad u xoogan iyo dhadhan macaan oo macaan leh, oo aan caadi ahayn oo qurux badan oo nadiif ah.
Ma taqaanaa? Gourmets waxay xaqiijineysaa in miraha barafka ugu macaan laysku dhufan karo Bali, iyo sidoo kale jasiiradda Java ee u dhow magaalada Yogyakarta. Kala duwanaanta ugu macaan waa Pondoh Salacca, iyo qaaliga ugu qaalisan - Kareemka Gula (waxaa lagu turjumay "sonkorta caanaha leh").
Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, kuwa aan la wadaagin dib u eegisyada ku saabsan dhadhanka sprat, marka la barbardhigo soodhadhka suufka, oo leh urka dhirta ama corvalol.
Sida loo doorto midho bisil
Waxaa laga yaabaa in shaki laga yiraahdo oo keliya in midho dhoobo ah oo laga yaabo in uu dhadhamo qadhaadh, iyo marka laga reebo, sida xasaasiga ah, waxay keenaan dareen maskaxeed oo aan fiicnayn oo afka ah. Tani waxay u sabab u tahay maaddooyinka sare ee fawaakihda aan qaangaarka aheyn, taas oo xiriir la leh xuubka xuubka, xanuujinta dhirta xididdada dhiigga, taas oo dareemeysa kabuub.
Baro waxyaabo badan oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee noocyada cayayaanka ah sida kiwi, damiin, avokado, longan, kivano, granadilla, cananaaska, guava, jackfruit, lychee, papaya.
Salak la'aanta qiiq la'aanta ah maaha kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale waa wax halis ah. Laakiin dhibaatadu waxay tahay in ku dhowaad dhammaan miraha qalaad ee loo keeno macaamiisheena laga soo bilaabo fog, waxaa si tartiib ah loo goosanayaa bisaylka buuxa, haddii kale waxay si fudud u qaadanayaan gaadiidka wakhtiga dheer iyo kaydinta. Isla mar ahaantaana, way ku adag tahay iibsadaha, oo aan haysan khibrad ku filan oo ku saabsan "isgaarsiinta" leh miro aan la aqoon, taas oo midho waa bislaado oo cagaar ah.
Khubarada ayaa marka hore talo ku siinaya in ay uriyaan sprat. Cabbirada adagi waxay muujinaysaa guuleysiga farsamo miro. Tilmaamaha labaad waa midabka madow ee maqaarka. Haddii miisaanku yahay guduud ama casaan, u diyaar garow jidhka inuu noqdo mid aad u badan. Intaa waxaa dheer, asiidhku waa mid ka mid ah miraha yar yar; ka weyn ee sprat, macmacaan yahay waa.
Waa muhiim! Miro waa inuu ahaadaa mid adag - jilicsanaanta ayaa soo baxaysa marka qallafsan yahay oo bilaabmaa inuu kareemo.
Salak, sida miro kale, waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh sababtoo ah walxaha bayoloji firfircoon ee qayb ka ah. Liistada walxaha noocan oo kale ah way kala duwanaan karaan iyagoo ku xiran hadba noocyada kala duwan ee miraha iyo meesha koritaankeeda, laakiin, waliba, soodhadhkeedu wuxuu ka kooban yahay:
fitamiino - beta-carotene (fitamiin A), ascorbic acid (fitamiin C), thiamin (vitamin B1) iyo riboflavin (vitamin B2);
macdanta - birta, kalsiyum, fosfooraska iyo potassium;
Fiber fiber (fiber);
Ogsoonow in fitamiin A ee ku jira xayawaanka qiyaastii shan goor ka badan kuwa qarxa ee ugu jecel. Hase yeeshee, wax yar maaha, laakiin, waa fareeshada. Sidaas, laga bilaabo tayada bogsiinta of herring waa la xusay:
Guryaha antioksidan iyo ka hortagga kansarka;
nadiifinta jirka ee sunta kala duwan iyo alaabta kala gedisan;
saameyn ku-sameysnayd, hemostatic iyo anti-bararka (sababtoo ah buunshaha);
ka hortagga istaroogga iyo cudurrada kale ee wadnaha;
kicinta kicinta unugyada;
qawaaniinta biyaha iyo hormoonka dheelitirka;
kicinta maskaxda, hagaajinta xasuusta;
hoos u dhigidda heerarka dhiigga ee dhiigga, ka hortagga sonkorta;
Hagaajinta habka dheef-shiidka (oo loo isticmaalo cuntada, waxay ka caawisaa calool-fadhiga, shubanka, xummad-dareenka);
saameyn ku leh nidaamka habdhiska dareenka (si kor loogu qaado niyadda iyadoo la adeegsanayo decoction gaar ah ee cawska of miro snake);
xakamaynta calaamadaha aan fiicnayn ee menopause.
Ma taqaanaa? Goobta Salacca zalacca, miraha iyo caleemaha geedka caleenta ah waxaa loo isticmaalaa in lagu soo celiyo aragti, iyo sidoo kale in lagu daweeyo bukaanka. Isla mar ahaantaana, dadka asalkoodu waxaynu ka saari karnaa roogaga asalka ah ee petioles, oo daboolaya saqafka gurigooda leh caleemo.
Kalooriyada saxarada ee miro maskaxdu way kala duwan tahay inta u dhexeysa 50-130 kcal halkii 100 g, kuwani waa badiyaa karbohidraatka.
Inkastoo dhammaantood "faa'iido" leh, Yurubiyaanka waa inaysan ku daaweyn midhaha masaska sida geedka daawada. Khatarta ugu weyn ee baltic waa xajmigeeda, taasina waxay khuseysaa dhammaan cuntada dibada. Jirka bani'aadamku wuxuu diiradda saari doonaa isticmaalka ugu muhiimsan ee alaabooyinka kuwaas oo ku dhaqan waddankooda.
Ma jiraan wax caddayn ah oo lagu kalsoon yahay in salakku uu kiciyay xasaasiyad, laakiin jawaab celin aan fiicneyn marka cuntada cunta aan cunnayn marwalba suurtogal maaha. Sidaa darteed Makhaayadan isla markiiba ha cunin tiro badan. Waxa kale oo aan loo baahnayn in la siiyo carruurta, gaar ahaan kuwa u nugul xasaasiyadda.
Taageerayaasha dhirta qoobcaya ee guriga ayaa lagu dhiirigeliyaa inay bartaan sifooyinka beeritaanka iyo daryeelidda avocados, pitahaya, annona, feijoa, kivano, longan, mango, papaya.
Si gaar ah, waa in la sheegaa oo ku saabsan khatarta ah in la isticmaalo dhirta firaaqada ah. Inkasta oo tani ay leedahay waxyaabo faa'iido leh, waxay sidoo kale dhaawici karaan jidhka. Adigoo xiraya fareebka, waxay dillaacaan caloosha, waxay soo rogaan waxyaabaha ku jira maadada cufnaanta cufan. Iyada oo aysidhka hooseeyo ama hoos u dhac ku yimaado mareenka caloosha iyo mindhicirta, waa tan ugu yareeya caloosha, ugu badnaan - xannibaad. Warka fiicani wuxuu yahay in fayaatada wax lagu kala qaybiyo geedi socodka daaqsinka.
Dabcan, dhibaatooyinka dheef-shiidka waxay keeni karaan oo keliya mid aan qaan-gaarin, laakiin sidoo kale miraha ka baxsan (dhoobo). Ma iibsan kartid miro khafiif ah, way sii xumaanayaan si dhakhso ah.
Waa muhiim! Khatarta cunidda miraha maskaxaha leh (si kastaba ha noqotee, sida cabsida) ayaa sii xumeyneysa haddii aad cabto caanaha.
Sumaweyntu sidoo kale waxay leedahay khasaare nadaafadeed marka la isticmaalayo dibadda. In kasta oo xaqiiqda ah in salak la cuno diirka, ka dib markii muddo dheer gaadiidka, inta lagu jiro taas oo midhaha ay ku imaan karto taabashada ilaha noocyo kala duwan oo infekshin ah, midhaha waa in si aad ah loo dhaqo biyo badan ka hor nadiifinta.
Sidee ayay tahay
Maqaarka harayga ee baltika Baltiga waa khafiif ah oo cufan, sida qolof. Waxaa si fudud loo saaraa, sida qolofta ukunta la kariyey, laakiin dhibaatadu waxay tahay in midhaha la daboolay waxyaabo yaryar, taas, haddii aan la soo kulmin, si fudud loo dhaawici karo. Si arrintan looga fogaado, si adag ayaan u dhaqmaynaa sida ku qoran tilmaamaha:
Kalluumeysi leh mindi fiiqan iyo shukumaan qaro weyn leh.
Dhinaca bidixda waxaannu qaadannaa tuwaal, oo qaboojiyaha lehna, si taxadar leh u gooyaa caarada fiiqan.
Qoryaha jarjarida meel la gooyey oo leh mindi si aad u aragto qaybaha ka samaysan midhaha.
Ku sii wadida sidii loo qaboojin lahaa shukumaan, waxaan ka dhignaa dhererka dhererka diirka ee xuduudaha u dhexeeya qaybaha.
Isticmaal mindi ama ciddida, ka ilaali maqaarka, ka dibna si taxadar leh u saar, adoo farahaaga ku haya gudaha gudaha, ka baxsan xariijinta, dhinaca.
Waxaan u qeybineynaa miro diirran oo loo qaybiyo qaybo kala duwan - cunto macaan!
VIDEO: SIDA AAD U QAADEYSAN KARTAA IYO CELINTA SALAC Salak, sida midho kasta oo kale, waa mid aad u faa'iido leh (noocyo kala duwan, waxaad ku dari kartaa salad, ma ahan mid miro ah), laakiin waddamada ay middani aanay ahayn qalaad, waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan oo kala duwan.
Ma taqaanaa? Salacca wine bali waa cabitaan khamri ah oo gaar ah oo adduunka laga sameeyay miro yar. Waxaa lagu sameeyey Bali tuulada Sibetan, oo ku taalla webiga Karangasem. Fikradda ah in lagu kariyo khamriga sprat wuxuu ku dhashay beeraleyda maxalliga ah oo aan nolol wanaagsan lahayn. Xaqiiqdu waxay tahay in xilliga xilliga beergooyska ee midhaha ubaxu ay kordhayaan halkan xaddiga badan, qiimaha qiimaha daroogada ah - sidaas awgeed, waa wax aan faa'iido u lahayn dadka beeralayda ah inay iibiyaan dalagyada cusub, saboolkuna ma laha goobo kayd oo casri ah. Go'aanka lagu isticmaalo khudradda halsano waxay ahayd mid aad u guuleysey ganacsiga aragtida. Tani waxay u oggolaaneysaa kaliya in ay xalliso dhibaatada ilaalinta, laakiin sidoo kale inay ka dhigto tuulo meel u ah xajka dalxiisayaasha. Khamrigu wuxuu leeyahay awood 13.5%, diyaarinta hal litir oo cabbitaankan ah waxaad u baahan tahay 4 kg oo khudrad ah.
Thais waxay u badan tahay in ay isticmaalaan salak marka la karinayo kariyaal, suugo iyo suxuun kale oo ku lug leh daaweynta kulaylka. Indoonesiyaanka waxay ku karsanayaan sonkorta, sida compote (macaan salak), iyo miraha tartiib tartiibka ah waa "xilliyeed" iyagoo ilaalinaya toddobaadkii marinade oo sonkor ah, milix iyo biyo la karkariyey (asinan salak).
Aan soo koobno. Salak waa mid ka mid ah miraha khafiifka ah ee ay tahay in qof waliba isku daydo ugu yaraan hal mar noloshooda. Waxaa fiican, dabcan, si aad uga sameysid dhulkii warshadda, adoo isku daraya dhadhanka oo leh safar dhalaalaya oo aan la ilaawi karin, maxaa yeelay waa habka kaliya ee lagu hubsan karo in alaabtu ay tahay tayo sare oo cusub. Laakiin xitaa xaaladdan, waa in la xusuustaa in cunto kasta oo aan la aqoon ay tahay mid khatar ah, iyo xaqiiqda ah in dadka maxalliga ah ay u isticmaalaan daawada la xaqiijiyay ee booqda waxay noqon kartaa sunta rasmiga ah.
Saaxiibadu waxay naga soo qaadeen miraha quruxda badan ee Thailand, kuwaas oo ay ka soo baxeen iyo salak. Isagu ima i eegin - yar, bunni, daboolo miisaan. Laakiin markii aan soo gaaro, waxaan isla markiiba dareemay ari aad u fiican oo la mid ah strawberries. Duufku waa mid aad u fudud in laga guuro ilmaha caloosha, sida barkinta shilka dhexe u dhexeeya. Galka miro waa huruud, jilicsan, wuxuu ka kooban yahay dhowr xabo, oo la mid ah toon toon. Gudaha kore kasta waxaa jira dhagax madow, oo aan lagama maarmaan ahayn in la cuno. Geedkeeda waa hindiso, casiir leh, macaan. Dhadhanka waa mid aad u xiiso badan, macaan iyo dhanaan, oo la mid ah strawberries iyo cananaaska isla waqti isku mid ah.
Ka dibna waxaan akhriyay in miro badani ay sidoo kale aad u faa'iido badan. Waxaa ku jira tannin, taas oo ka saareysa walxaha waxyeelada leh jirka. Intaa waxaa dheer, waxa uu leeyahay saameynta astronauce, saamiga hemostatic, hagaajinaysaa difaac. Maaddada kalooriga waa 50 kcal 100 garaam.
Midhihii waxay cuneen 10 daqiiqadood kahor, gacmahayguna wali way urlaan sidii cunto fudud!
Guud ahaan, waxaa jiri doona fursad, hubso inaad isku daydo!